Man City waxba meesha kuma hayso – Hart
HomeWararka MaantaMan City waxba meesha kuma hayso – Hart
Joe Hart ayaa ku adkeeyey kooxdiisa Manchester City inay hawl fiican oo adag qabato haddii ay doonayo inay u tartanto horyaalnimada sanadkan ee Premier League.
City, oo maalintii u dambeysay ku guuleysatay horyaalka sanadkii hore, ayaa ay isku dhibco ahaayeen Chelsea oo ay kaalinta koobaad wada fadhiyeen bishii January ee aynu soo dhaafnay, laakiin imika cidlo heehaabaysa oo ka soo dhacday figta sare kadib markii ay lumisay 21 dhibcood 14 ciyaarood oo ay yeelatay sanadkan 2015 ka.
“Ma joogno booskii aanu jeclayn inaanu fadhino maanta – waxaanu dhab ahaan rabnay inaanu horyaalka ku dagaalano sidii sanadkii hore aanu samaynay oo kale. Si daacad ah ayaanay nooga wada go’nayd,” ayuu Hart ku yidhi warfidiyeenada.
“Anaga ayaa ogolaanay inaanu ka soo dhacno booskii aanu ku dagaalamaynay. Waanay adag tahay inaanu horyaalka ku dagaalano imika. Labadii jeer ee aanu qaadi lahayn waxay u muuqdaan kuwo meesha ka baxay.
“Xili ciyaareedkan, ciyaaro badan ayaanu si wanaagsan u ciyaarnay, Laakiin wakhtiga ayaa naga horyimid oo dib noo celiyey, waana siday tahay.
Liverpool 2-0 Tottenham – Mane Oo Cashar U Dhigay Spurs
11/02/2017 Abdiwahab Ahmed
Daawo Goolasha: Real Madrid Oo Cashar U Dhigtay Villarreal